Amakhono wezinhlanzi uLa Luna namaBonfires - iSan Mauro Torinese
Izinhlanzi ezikhethekile "La Luna ei Falò" - ISan Mauro Torinese
Izinhlanzi ezidliwayo kanye nobuhle be-marinade.
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-93)
Okukhethekile Izinhlanzi "Inyanga kanye Nemoto Eyisisekelo" a ISan Mauro Torinese, isifundazwe eTurin, inikeza okumnandi nsuku zonke ubuhle basolwandle. Futhi I-Pizzeria nge-oveni yokhuni neziphakamiso eziningi ezimnandi ezigcwalisa futhi zinothise imenyu yokudlela.
Izinhlanzi ezikhethekile "La Luna ei Falò" - Indawo yokudlela yase-San Mauro Torinese, eTurin
Amakhono wezinhlanzi nabanye abaningi izibiliboco zemarinade kanti cha, kungukulunga ukuthi I-Ristorante "INyanga kanye neMililozelo" enikeza eSan Mauro Torinese, isifundazwe sase ITurin. Imenyu ecebile iboniswa yizinhlobonhlobo ezinkulu zabathengi izidlo zasolwandle. Kuqala ngezinhlobonhlobo eziningi zama-appetizer, noma eluhlaza, kubathandi bohlobo, nge-tartare, carpaccio e imfanzi. Izifundo zokuqala ze amakhono enhlanzi yokudlela inikezela ngeziphakamiso zakudala ezifana ne-linguine all 'isikhuphashe, kodwa nezitsha zoqobo ezifana IGnocchi ngokudla kwasolwandle. Kunokukhethwa okukhulu kwezifundo eziyinhloko zasolwandle: ukuthambisa, ukuthosa nezindlela eziningi zokupheka inkemba ne-tuna. Zonke izibiliboco zasolwandle i-del Indawo yokudlela yaseMarinaro "INyanga kanye namaBhonasi" zilungiselelwe ngezithako eziseqophelweni eliphezulu kakhulu nezisezingeni eliphezulu.
Okukhethekile kwezinhlanzi "La Luna ei Falò" - Imenyu yokunambitha nezitsha ezicebile
È angakujabulela amakhono okudla kwasolwandle i-del Indawo yokudlela yasolwandle "INyanga kanye neMililozelo" ngemenyu ehleliwe yokunambitha amanani ama-euro angama-40. Izitsha, ezikhethiwe kwezihlotshiswe kakhulu futhi ezaziswa kakhulu, zilungele ukujabulela zonke izinhlanzi ezinhle kakhulu. Imenyu ifaka zonke izifundo, kusukela kuma-appetizer kuya kuma-dessert futhi neziphuzo, ikofi kanye nokubabayo. "INyanga kanye neMililozelo" futhi inikeza imenyu yangeSonto, ecebile ngemininingwane futhi imnandi izitsha zenhlanzi. Izindleko zemenyu yangeSonto ngama-euro angama-30 kanti, imenyu yokunambitha, ifaka zonke izifundo kusuka ku-appetizer kuya kophawu, kanye neziphuzo ezibandayo nekhofi.
"INyanga nama Bonifresh" - Hhayi amakhono olwandle kuphela
Imenyu yokudlela ibandakanya ukunikezwa okukhulu kwezitsha zomhlaba. Kusuka kuzinto zakudala ama-appetizer ebandayo ahlanganisiwe con ukukhiqiza I-DOP yendawo kanye nokugqwesa okuhle kwe-Italy, ngezifundo zokuqala zendabuko ezinjenge-carbonara ebabazekayo. Izifundo zesibili zenyama ezinjenge-tagliata nge-rocket ne-parmesan zigcwalisa ukunikezwa. Futhi: ama-scallops anewayini elimhlophe noma i-asparagus, izihlakala ezinepelepele noma amakhowe ngezinye nje zezitsha ezinhle kakhulu "INyanga kanye neMililozelo" Izipesheli kulabo abangazithandi amakhono okudla kwasolwandle.
Izilwandle ezidliwayo zasolwandle kanye nePizzeria edumile esifundazweni saseTurin
"INyanga nama Bonsares, ngaphezu kokunikeza okungcono kakhulu amakhono okudla kwasolwandle, futhi I-Pizzeria nge-oveni yokhuni. Kuneziphakamiso eziningi ze-pizzas ezilungiselelwe ngokwesiko lamaNeapolitan, i-focaccia egcwele ushizi nokusika okubandayo, kanye nokunye okukhona okuningi. Pizzas of "La Luna ei Falò" Indawo yokudlela yasePizzeria zilungiselelwe ngokunakekelwa okufanayo nezinhlanganisela ezikhethiwe nezekhwalithi efanayo ezisetshenziselwa zonke ezinye izitsha, ngokwenza kanjalo kwenza abathengi bazo bangathandi kuphela izinhlanzi ezikhethekile, kodwa nama-pizzas amnandi. "INyanga kanye neMililozelo" a ISan Mauro Torinese aziwa kahle esifundazweni sonke saseTurin nasezindaweni ezizungezile ngekhwalithi yezitsha zayo. Indawo ejwayelekile neyamukelekayo, abasebenzi abanomusa nabasebenza kahle, indawo ekhanyayo neqabulekile ehlobo nobusika ngaphandle, yenza indawo indawo yokudlela "La Luna ei Falò" indawo ekahle yokudla okumnandi kosuku nobusuku obumnandi.
Ikheli: I-Via Torino, 210
Idolobha: ISan Mauro Torinese
I-POSTAL CODE: 10099
Ucingo: 011 8220462
Umakhala ekhukhwini: 339 3876113
Inombolo ye-VAT: 09376960010